ခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ) – Page2– The Voice Journal
တရုတ်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဆန်လာပြီလား ?
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အာဖရိကကို ငွေချေးတဲ့ပုံစံဟာ အနောက်တိုင်း ဆန်လာပြီလား ? ၊ အနောက်တိုင်းပုံစံတွေကို စတင်ကျင့်သုံးနေပြီလား ?။ ကင်ညာနိုင်ငံက သမ္မတဟာ လူမြင်ကွင်းကနေ ဆယ်ရက်လောက် ပျောက်နေတော့ ကင်ညာနိုင်ငံသားတွေ ‘သမ္မတကို ရှာပေးကြပါ’ ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်ကြတယ်။...
၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းက တရုတ်ကုမ္ပဏီ (Alibaba) ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဟန်ကျိုးမှာ အခြေစိုက်ပြီး သူ့ဈေးကွက်ရဲ့ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာရှိနေပေမယ့် အမေရိကန်စတော့ဒိုင်မှာ စာရင်းပေါက် (Listed) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အရင်းအနှီးဈေးကွက်တစ်ခုထဲကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။...
မပစ်နိုင်၊ ချစ်ဆဲဒေါ်လာနဲ့ နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက် အပြောင်းအလဲ
မပစ်နိုင်၊ ချစ်ဆဲ ဒေါ်လာ နာမည်ကြီးဝတ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ သူ အလွန်မုန်းတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ အလှဘုရင်မတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရေးထားတယ်။ အတူနေတော့လည်း အဆင်မပြေ၊ ကွဲတော့လည်း အဆင်မပြေ၊ ပြီးရင်လည်း ပြန်ပေါင်း။ ဘာဖြစ်လို့ ပြန်ပေါင်းရသလဲမေးတော့ မပေါင်းလို့ မဖြစ်လို့တဲ့။ အဲဒီအကြောင်းကို...
ခါးပတ်တစ်စင်း၊ လမ်းတစ်စင်းနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ
တစ်နေ့က စင်္ကာပူက ပါမောက္ခတစ်ယောက် ရောက်လာတာနဲ့ ဆုံဖြစ်ကြ၊ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်ရဲ့ ခါးပတ်တစ်ကွင်း လမ်းတစ်စင်းအစီအစဉ်အကြောင်း ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ သူရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူနဲ့ဆွေးနွေးချိန်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်နေတဲ့ အစည်းအဝေးမတိုင်မီကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့က...
နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာရဲ့ ရောင်းအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာစာရင်းဝင်၊ Ruchir Sharma ရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ၂၅ နှစ်ခရီးအကြောင်းရေးထားတဲ့၊ လမ်းပေါ်ကဒီမိုကရေစီ (Democracy on the road) စာအုပ်ကို ကာလကတ္တားလေဆိပ်မှာ ရလာခဲ့ပြီးကတည်းက ရွေးရွေးပြီးဖတ်နေမိတယ်။ သူက ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကို...
Articles / Perspective / Politics
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောက်ဖူးတာ ခုနစ်ခေါက်မကဘူး။ အများအားဖြင့် ခရီးသွားအတွေ့အကြုံတွေကို ရေးလေ့ မရှိဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်က ထူးခြားတာတွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ၊ ပြန်ပြောပြဝေငှချင်တာတွေများနေလို့ မေ့မသွားခင် ချရေးလိုက်တာ။ ခရီးစဉ်အစပိုင်းမှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာတွေရှိပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး နောက်ဆုံးအပိုင်းက စရေးပါမယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ...
ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခု လက်ခံကြ၊ စိုးရိမ်ကြ
‘ဒီရာစုနှစ် (၂၁ ရာစု) ရဲ့ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြီး’ လို့ပြောတာက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင် ရှီကျင့်ဖျင်ပါ။ တရုတ်စာနယ်ဇင်းတွေကတော့ ‘ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တရုတ်ဉာဏ်ပညာလက်ဆောင်’ လို့ သုံးနှုန်းကြပြန်တယ်။ တကယ်တော့ ‘ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခု (One Belt, One Road)...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရနှစ်ခု ရှိတယ်။ အားကောင်းသော (Strong) တဲ့၊ အားနည်းသော (Weak) တဲ့။ အဲဒီနှစ်ခုကို တခြားနာမ်တွေဖြစ်တဲ့ လူ (Men) တွေ၊ နိုင်ငံ (States) တွေနဲ့ တွဲလိုက်တဲ့အခါ အားကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ အားနည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊...
ဒီမိုကရေစီ – တာဝန်ယူမှု (Democratic Accountability)
ဒီမိုကရေစီအရ မဲဆန္ဒရှင်တွေက သူတို့ရဲ့အစိုးရကို သင့်တင့်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေပေးထားပြီး တစ်ဖက်ကလည်း အစိုးရထမ်းဆောင်ရမယ့်မူဝါဒတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လိုခိုင်ခိုင်မာမာ ထိန်းချုပ်ထားသလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖရန့်စစ်-ဖူကူယားမား (Francis Fukuyama) ဆွေးနွေးထားတာကို ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ ဘယ်လိုပဲအဓိပ္ပာယ်ကောက်ကောက် ဗျူရိုကရေစီ၊ ဒါမှမဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့...